ပစ္စည်းအမည် 1000pcs MOQ China Wholesale Customised Vintage Handmade Coxmetic Box for Skin Care Cream
အသွင်အပြင် 1). Box ကိုအရွယ်အစား: သင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုအဖြစ်စိတ်ကြိုက်
2). ထုပ်ပိုး: client ကိုတောင်းဆိုချက်အရသိရသည်
3). ပစ္စည်း: မြှောင်းပုံစက္ကူ, Artcard စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, အဖြူဘုတ်, kraft စက္ကူ, သစ်သားမဲ့စက္ကူ coated စက္ကူ,paperboard နှင့်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှုန်းအဖြစ်.
4). ကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်း: 4-အရောင် offset ပုံနှိပ်, သို့မဟုတ် Pantone ပုံနှိပ်ခြင်း, according to customer's offered artwork
5). Option: Glossy & Matt Lamination; Glitter power; Golden/Silver Hot-stamping ; ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်; Screen-printing; Emboss & Deboss; Glossy varnish
1). Hand sample time: အတွင်းမှာ 7-15 ရက်ပေါင်း.
3). ပြန်အမ်းငွေနမူနာ: Negotiable
ထုပ်ပိုး 4). Send sample: Via TNT, ယူပီအက်စ်, FedEx, DHL Express
နမူနာများ Sample free provided if you need our stock for check the quality.
Present packaging box are made by rigid paper and widely used for Chocolate, ဝိုင်, အလှကုန်, ရေမွှေး, အဝတ်အထည်များ, လက်ဝတ်ရတနာ, ဆေးရွက်ကြီး, အစားအစာ, Make up set packaging box are customized in box style ,အရွယ်အစား ,print and quantity . Pls feel free to contact us if you have any ideas about your packages
Suitable for packaging present, လက်ဆောင်, အဝတ်အစား, အလှကုန်, ဆံပင်ဉီးထုပ်, ဖိနပ်, ရတနာ, စောင့်နေ, မျက်မှန်, ချောကလက်, ဆေးဝါး, boutique, နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်, နှင့်အခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွှေ၊ ငွေရောင်ပူတံဆိပ်တုံးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်, တောက်ပ / Matt lamination, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, ဖောင်းကြွ, သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ် debossing.
သင်၏ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန် Professional design အဖွဲ့
FSC အသိအမှတ်ပြုကုန်ကြမ်း & သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကုန်ကြမ်းများ
Professional Pre-sales နှင့် After-sales service, စျေးဝယ်ခြင်းအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အစိုင်အခဲသတ္တုနှင့်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်ချောချောအမျိုးမျိုးဖြင့်ရွေးချယ်ပါ, တိကျသောဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များကိုမှတည်ဆောက်ခဲ့သည်.
FSC နှင့် SGS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရခဲ့သည်.
ထုပ်ပိုး: 1pc / Ploybag,50-100PC / Carton, တစ် ဦး က = တစ် ဦး ကအပြင်ဘက်ပုံး, သို့မဟုတ်ဖောက်သည် '' သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှုန်းအဖြစ်.
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: အမြန်ဖြင့်နမူနာ (DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS), လေကြောင်းဖြင့်, ပင်လယ်ပြင်မှအကြီးစားထုတ်လုပ်မှု ...
အမှတ်အသားများ (Tags)：Lid နှင့်အခြေစိုက်စခန်း